WARBIXIN: Xagaaga Man United… Maxay U Baahantahay In Ay Samayso Si Ay Xaalka U Saxdo – Wararka Ciyaaraha Maanta
May 20, 2019 kooxda Premier League, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixino 0
Waxa aynu ku nool nahay xaalad soo noq-noqota xagaa kasta tan ilaa 2013 markii uu Si Alex Ferguson ka fadhiistay ciyaaraha kubada cagta iyada oo qaab ciyaareedka kooxdu noqdo min dib u socda xilli ciyaareedba midka ka dambeeya iyada oo ay kooxdu shaki la,aan gaadhay Khatar dhab ah.
Man United ayaa kaalinta 6-aad ku dhamaysatay kala saraynta horyaalka Premier Leageu markii 2-aad 6-dii sano ee ugu dambaysay laakiin markii hore waxa ay ku guulaystay Europa League iyada oo sidaas uga soo qayb gashay champions League laakiin xilli ciyaareedkan Europa League ka qayb gali doonta qaab ciyaareedka liita ee ay soo bandhigeena waa mid aan rajo galinayn taageero kasta oo kooxda ah.
Sida uu xaalku yahay suuq kasta oo xagaa iyo waliba in la badalo tababarayaasha tan ilaa 2013 waxa xilli ciyaareedkan kooxda hogaamin doona halyeeyga kooxda ee Ole Gunnar Solskjaer suuqa xagaaga ayaana noqon doona mid aad muhiim ugu ah kooxda si ay u dhisto koox mustaqbal leh oo ku soo laabata halkii ay ka joogtay yurub.
Suuqa Xagaaga 2019:
Man United ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u liita marka laga hadlayo dhanka jir ahaanta xilli ciyaareedkii dhamaaday waana arin uu tababare Ole Gunnar diirada saari doono inta lagu jiro kulamada isku diyaarinta waxana uu sheegay muhiimada ay leedahay in ay xiddigaha kooxdu 1 bisha July soo xaadiraan iyaga oo si buuxda u leh awood jir ahaaneed.
Saxiixyada Man United Uga Baahantahay Suuqa Xagaaga:
Tababare Ole Gunnar Solskjear ayaa horay u sheegay in ayna kooxdu la soo saxiixan karin xiddigo aad u badan si ay xilli ciyaareed kaliya u buuxiso meelaha ay ka jilicsantahay kooxdu laakiin waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa 5-ta boos ee ay Red Devils u baahantahay in ay iska xoojiso xagaaga.
1.Garabka Daafaca Midig:
Man United ayaa xagaagii la soo saxiixatay xiddiga Diogo Dalot kaas oo ka ciyaara daafaca Midig laakiin Khibrad la,aantiisa ayaa tababarayaasha kooxda ku qasabtay in ay Ashley Young ka ciyaarsiiyaan garabka daafaca inta badan xilli ciyaareedkan marka loo eego dhaawacii uu la maqnaa Antonio Valencia laakiin Young ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed aad u xun dhanka difaacashada ama weerarka laakiin wax eed ah ma lahan maadama uu booskiisii caadiga ahaa yahay garabka weerarka waliba yahay 34 jir.
Waxa lala xiriirinayaa xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Crystal Paalce ee Aaron Wan-Bissaka kaas oo lagu heli karo lacag dhan 50 Milyan oo euro
2.Garabka Daafaca Bidix:
Ku Guulaysigii Luke Shaw ee abaalmarinta xiddiga ugu fiican Man United xilli ciyaareedkan ayaa muujinaya in ayna Jirin xiddigo qaab ciyaareed fiican soo bandhigay xilli ciyaareedkan, Kooxda Man United ayaana si aad ah ugu dhibaatootay in ayna haysan badalka Luke Shaw waliba si fiican ugula tartama booska.
Waxa laga yaabaa in uuna garabka daafaca Bidix noqon muhiimad aad u weyn xagaaga laakiin waxa laga yaabaa in ay helaan xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Leicester City ee Ben Chilwell kaas oo lagu qiimeeyo 50 milyan oo euro.
Waa booskii uu Jose Mourinho kaga tagay kooxda isaga oo si weyn uga cabaadaya waliba maamulka kooxda wax walba u sameeyay sidii uu ugu keeni lahaa daafaca dhexe waliba la odhan karo waa sababta ugu weyn ee ay Man United la dhibaatoonaysay xilli ciyaareedkan.
Waxa aan qarsoodi ahayn xiisaha ay Man United u qabto xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Napoli ee Kalidou Koulibaly kaas oo laga yaabo in lagu helo lacag dhan 90 Milyan oo euro.
4.Xiddig Khadka Dhexe Oo Daafaca Ah:
Xilli ciyaareedka Man United ayaa si weyn hoos ugu dhaadhacay kadib markii uu qaab ciyaareedka Nemanja Matic hoos u dhacay sabab la xidhiidha dhaawacyo iyo waliba daal aad u badan.
Marka loo eego xiddigo badan oo jooga Premier League waxa jira xiddigo da,yar ah oo booskaas ka fiican sida xiddiga west Ham ee Declan Rice kaas oo lagu qiimeeyo lacag dhan 50 milyan oo euro.
5.Garabka Weerarka Midig:
Waxa booskaas ka ciyaaray xiddigaha Juan Mata, Jese Lingard, Rashford iyo waliba Martial laakiin xiddigahaas ayaa dhamaantood ku fashilmay in ay wax ku soo kordhiyaan kooxda iyada oo ay si weyn u saamaysay awood la,aantooda dhanka garabaha weerarka.
Sidaas darteed xoojin dhanka garabka weerarka waxa ay Man United suuqa ka helaysaa xiddigo badan oo sida Nicolas Pepe xiddigaas oo u ciyaara Lille laguna heli karo 60 ilaa 70 milyan oo euro.